I-Entropy: kuyini, izici, izakhiwo nemvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sikhuluma nge-thermodynamics, i- entropy. I-entropy yesistimu uhlobo lwesilinganiso samandla alutholakali kusistimu ye-thermodynamic noma evaliwe nayo evame ukucatshangwa njengesilinganiso sokuphazamiseka kohlelo. Kuyimpahla yesimo sohlelo ehluka ngqo nganoma yiluphi ushintsho, inqobo nje uma ingaguqulwa ekushiseni kohlelo noma ngokungafani nokushisa kohlelo.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-entropy futhi sizokunikeza izibonelo ezithile empilweni yansuku zonke.
1 Incazelo ye-entropy
3 Izici ze-entropy
4 Ithempelesha nemvelo
Siyazi ukuthi yisilinganiso samandla esingatholakali ngaphakathi kwesistimu ye-thermodynamic evaliwe. Enye indlela yokusebenzisa i-entropy ukukala ukuphazamiseka kohlelo. Lokho kusho ukuthi, Isiphithiphithi ngaphakathi kohlelo kungenxa ye-entropy. Ngokuvamile, njengoba izinga lokushisa landa noma lincipha, kunezinguquko ezinkulu kuma-molecule nama-athomu akha uhlelo.
Uma sichaza i-entropy ngamagama alula singasho ukuthi kungukucekelwa phansi kwendaba namandla endaweni yonke kuya esimweni sokugcina sokufana kwe-inert.
Sizobona ukuthi yiziphi izici eziyinhloko ezihlanganisa i-entropy. Inezici ezintathu eziyinhloko. Enye yazo ukuthi ukungena kwesistimu kuyanda lapho ukushisa kunikezwa ohlelweni kungakhathalekile ukuthi izinga lokushisa nalo liyakhuphuka ngenxa yalokho. Okusho ukuthi, kunoma yiluphi uhlelo lapho singenisa khona ukushisa, i-entropy yesistimu iyanda.
Lapho sifaka ukushisa ku-ecosystem, noma ngabe izinga lokushisa liyashintsha noma cha, i-entropy iyancipha lapho lokhu kushisa kunqatshwa. Ku- Kuzo zonke izinqubo ezi-adiabatic, inani le-entropy lihlala limi ngokuhamba kwesikhathi. Ungayilinganisa kanjani i-entropy kumele yenziwe ngokucophelela okukhulu. Futhi ukuthi, lapho kulinganiswa, kufanele kuthathwe izinqumo ezingenangqondo futhi ezinye zazo zingagwemeka. Isibonelo, iyunithi lembudumbudu, ethatha lokho okubizwa ngokuthi isilinganiso se-entropy, kepha eminye imikhawulo ayinakunqotshwa.
Masithathe isibonelo ukucacisa lokhu kangcono. Uma kufanele senze ukukhetha mayelana nokuthi singazichaza kanjani izehlakalo ezithile ezenzeka njengoba i-entropy ingenzeki njalo, singachaza into efanayo ngendlela efanayo. Lokhu kungumkhawulo omkhulu kunomkhawulo ojwayelekile futhi ngokuvamile kuyaziwa ukuthi ukuze kukalwe i-entropy, isizinda senkinga ezolashwa kumele saziwe.
Kodwa-ke, singachaza i-entropy njengomsebenzi olula ngokwedlulele. Ine-logarithm eyodwa kuphela ethintekayo nenombolo yezinto ezinezici ezithile zentshisekelo.
Sizoqala ukuchaza ukuthi yiziphi izinto ezibaluleke kakhulu ze-entropy kokuhlangenwe nakho kwethu kwansuku zonke. Ingabekwa njengento engenasisindo futhi lokho kungangena kukho konke emhlabeni wethu. Kuyisakhiwo esihlobene nenani lezinto emzimbeni elibhekisa esifundeni sendawo futhi singaphathwa njengezinto. Ngale ndlela, i-entropy ingasatshalaliswa endaweni yendaba, inqwabelene ngokungafani noma ngqo. Ingakhishwa futhi, icindezelwe noma idluliselwe kwenye into. Ngale ndlela, singakuhlanganisa namandla ethu.
Siyazi ukuthi i-entropy ishintsha isimo sento kakhulu. Lapho into iphansi ngobuningi, ibonakala ibanda. Uma inganekwane ebonakalayo iqukethe inani elinyukayo le-entropy kungabonakala njengokuthiwa kuyashisa. Kungakho sazi ukuthi idlala indima ebalulekile kuzo zonke izici ezishisayo futhi ingathathwa njengembangela yale miphumela. Ngaphandle kwalesi silinganiso akukho bushushu noma ukushisa. Imvamisa ithambekele ekusakazekeni kuwo wonke umzimba ofanayo futhi ibhujiswa ngokuzenzakalela ngokukhulu ukushesha nangokulingana kulo lonke ivolumu.
Kule nqubo, siyabona ukuthi ukungena entropy kusuka kokushisayo kuya emzimbeni obanda kakhulu. Kunezinto ezingabaqhubi abahle ezifana nesiliva, ithusi, idayimane ne-aluminium nezinye ezingabaqhubi ababi futhi ezenza ukuthi zihambe kancane kakhulu njengokhuni, amapulasitiki noma umoya. Ngenkathi empilweni yansuku zonke sisebenzisa abaqhubi abahle ukuyidlulisa, sisebenzisa abaqhubi ababi njengabavikeli.
Inani elikhulu le-entropy likhiqizwa kwikhoyili yokushisa yesitshalo samandla. Zibuye zivele elangabini lesishisi samafutha nasezingxenyeni zokungqubuzana kohlelo lwama-disc brake. Enye indawo lapho kwenziwa inani elikhulu lisemisipheni yomsubathi osemnyakazweni oqhubekayo. Kungokufanayo nasebuchosheni. Lapho sicabanga, kukhiqizwa inani elikhulu le-entropy.
Sazi kahle ukuthi ukukhiqizwa kwenzeka kuzo zonke izimo emvelweni. Kunoma isiphi isimo lapho kukhona ushintsho kukhona i-entropy ebandakanyekayo. Isici esimangalisa kakhulu ukuthi sikhona ukuthi kwenzeka cishe kuzo zonke izinqubo ezenzeka empilweni, kungaba ngamanani amancane noma amakhulu. Okwamanje ayikho indlela eyaziwa ngayo, uma inani le-entropy selikhiqiziwe, alikwazi ukubhujiswa. Inani eliphelele elikhona lingakhuphuka kuphela futhi lingaze lehle.
Noma iyiphi inqubo ekhiqiza i-entropy ayikwazi ukubuyisa la mandla ngoba iyisistimu engalungiseki. Lokhu akusho ukuthi umzimba ungabuyela esimeni sawo sokuqala, kuphela ukuthi leli nani lokushisa lishiya umzimba wakho. Isimangalo sokuthi siyakhula kepha asinciphi yilokho okuqukethwe umthetho wesibili we-thermodynamics. Uma ingekho indawo yokufaka i-entropy, akunakwenzeka ukuthi umzimba ubuyele esimeni sawo sokuqala.
Njengoba ukwazi ukubona, kuyinto enzima ukuyichaza kepha ilusizo kakhulu usuku nosuku. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngalesi sihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Entropy